Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် ရောင်စုံယက် Polypropylene အထည် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်စုံယက် Polypropylene အထည် ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
ကိုလိုက်ရှာသည် ရောင်စုံယက် Polypropylene အထည်? ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Summer Show Plastic Corporation ကွဲပြားခြားနားသောပုံသဏ္andာန်နှင့်အရွယ်အစားအတွက်ထိပ်တန်းအရည်အသွေး PP နှင့် PE ထည်ထုတ်လုပ်အထူးပြု။ ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တိုင်းတွင်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအတိုင်းအတာများကိုထိန်းသိမ်းထားရန်ကျွန်ုပ်တို့အလေးထားသည်။ ရရှိလာသောချွတ်ယွင်းမှုနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်၏ထိရောက်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရွယ်တူချင်းများကြားကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုယှဉ်ပြိုင်စေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ယက်ထည်များနှင့်အိတ်များကို ဖြတ်၍ ထောက်ပံ့ပေးသည် Taiwan နှင့်ပို့ကုန်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
, ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ဒီနေ့
ရောင်စုံ Polypropylene ယက်ထည်
Strip count က:12 အတိုင်*အတိုင် 15 မှ 10wefts*၁၅ ရက်
ကျနော်တို့စက်မှုအစွမ်းသတ္တိကို PP အိတ်များနှင့်အခြား PP ထုတ်လုပ်ရန်အထူးပြု/PE ပစ္စည်းနှင့်ထုတ်ကုန်.မိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်းများကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်သင့်ထံမှကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါသည်.ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီပစ္စည်းများ၏သတ်မှတ်ချက်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.wovensack.com.tw/my/colored-woven-polypropylene-fabric.html
ရောင်စုံယက် Polypropylene အထည် ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုဝယ်ပါ။ ရောင်စုံယက် Polypropylene အထည် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan တွင်ရှိသောစက်ရုံ